ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများတွင် မွေးဖွားနှုန်းမြင့်မားပြီး ချမ်းသာသောနိုင်ငံများတွင် မွေး?? - Yangon Media Group
ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများတွင် မွေးဖွားနှုန်းမြင့်မားပြီး ချမ်းသာသောနိုင်ငံများတွင် မွေး??
ပဲရစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၉
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံများ၌ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း နိမ့်ကျနေ သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၌ ကလေးမွေးဖွားနှုန်းများပြားနေသော ကြောင့် နိုင်ငံတကာပြဿနာတစ်ရပ်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရလိမ့်မည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်က ထုတ် ပြန်လိုက်သော သုတေသနအစီရင် ခံစာတစ်ခုတွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်တွင် The Bill and Melinda Gates Foundation မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော The Institute for Health Metrics and Evaluation(IHME) ဌာနက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းနိုင်ငံများအလိုက် မွေးဖွား မှုနှုန်း၊ သေဆုံးနှုန်းနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများ စာရင်းအချက်အလက် ၈ဝဝဝ ကျော်စာရင်းကောက် ယူ သုတေသနပြု တွေ့ရှိချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့၏ သုတေသနပြု ချက်များအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်မှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်းက ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံမှ ၇ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအတွင်း ရှိနေခဲ့ ပြီးတိုင်းပြည်အလိုက် ဝင်ငွေ တိုးတက်မှုနှုန်းများ မတူကွဲပြား ရှိခဲ့ရသည်။ ဥရောပတိုက်၊ တောင်နှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်ကြီးများရှိ နိုင်ငံများအနက်မှ ၉၁ နိုင်ငံသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်း နည်းသော် လည်း နိုင်ငံများ၏ အချိုးညီရှိခဲ့ရ သည်။
သို့သော် အာဖရိကနှင့် အာရှ နိုင်ငံများတွင်မူ ကလေးမွေးဖွားမှု နှုန်း များပြားကာ အထူးသဖြင့်နိုင် ဂျီးရီးယားကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် မိသားစုတစ်စုလျှင် သားသမီး ခုနစ်ဦးအထိ မွေးဖွားထားကြသည်ဟု သု တေသနအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ IHME မှ ကျန်းမာရေးစံနှုန်းများ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ပါမောက္ခအလီမွတ်ဒတ်က AFP သို့ ပြောဆိုလိုက်သည်။ ”ယင်းသည် ဆင်းရဲသောနိုင်ငံများအတွက်မူ စီးပွားရေးပြဿနာ များ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်” ဟူ၍ ဆက်လက် ပြောဆိုလိုက်သည်။ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များ အရ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသည် အသင့် အတင့် ချမ်းသြာ<ွကယ်ဝသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သော်လည်း မိသားစု တစ်စုတွင် ကလေးတစ်ဦးသာ မွေး ဖွားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် မာလီ၊ ချက် နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံများတွင် မူ မိသားတစ်စုတွင် ကလေးခြောက် ယောက်ကျော် ကျွေးမွေးပြုစုစောင့် ရှောက်ခဲ့ကြသည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ ကလေး မွေးဖွားမှုနှုန်းသည် နိုင်ငံ၏ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုနှင့် အချိုးညီရှိနေသည်ဟု ၎င်းက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက် သည်။ ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများတွင် မွေးဖွားမှုနှုန်းနှင့် နိုင်ငံ ဓနဥစ္စာအ ချိုးမညီမှုကြောင့် စစ်ပွဲများ၊ နိုင်ငံ မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နေကြ ရသည်။ ဥဇဘတ်ကစ္စတန်၊ ယူကရိန်း နှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံများ၊ တောင် ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ များတွင် သေဆုံးမှုနှုန်း နည်းပါးကာ အသက်ရှည်သူများပြားသည်။ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်မှ စတင် ကာ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ အဆုတ်ရော ဂါများ ကင်းပပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ ရ၍ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု နည်းသော နိုင်ငံများတွင် သေဆုံးမှုနှုန်း လျော့ နည်းခဲ့ကြသည်ဟူ၍ အစီရင်ခံစာ တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အမေရိကန် ဂီတဆုပေးပွဲတွင် ဆလီနာဂိုးမက်ဇ် ဖျော်ဖြေမည်